Yedu Showroom - Yakareruka Multi Ratidza - Dhijitari Signage Software
Shanyira edu showroom kuti uone Nyore Multi Ratidza muchiito
YEDU SHOWROOMS & TRAINING CENTERS
Isu tine vatengi mose muEurope, uye tinozvirumbidza pamusoro pekirasi yedu yenyika rutsigiro uye vatengi basa. Yedu nyanzvi yekutarisira vatengi kwakatitungamira kuti tigadzire 2 makamuri ekuratidzira kwatinopa mademo uye kudzidziswa.
Yedu Showroom muBrussels ikozvino YOSHURE!
Kune yedu ichangobva kugadziridzwa showroom muBrussels, unogona kubatana nesu kuyedza kugona kweNyore Multi Display.
Tora mibvunzo yako kupindurwa nemumwe weedu akazvipira rutsigiro vashandi uye dzidza kudzidziswa pamusoro Easy Multi Display kuti iwe ugone kuwana yako digital signage mhinduro kumusoro uye kumhanya pasina nguva.
Pane ino nzvimbo:
Tumira kubva kuRICOH THETA. # theta360fr - Spherical Mufananidzo - RICOH THETA
Yedu Showroom muMontpellier, Maodzanyemba eFrance
Tiri kushanda nesimba mukugadzira imba yekuratidzira muMontpellier uko iwe uchazokwanisa kubatana nesu kuyedza Easy Multi Ratidza.
Ita kuti mibvunzo yako ipindurwe neumwe wevashandi vedu vakazvipira uye ugamuchire yakatsaurirwa, imwe-on-one kudzidziswa kana timu kudzidziswa maitiro ekushandisa zvakanyanya Easy Multi Ratidziro kuti iwe ugone kuwana yako digital signage mhinduro kumusoro uye kumhanya pasina nguva.
Unoda kuona Easy Multi Ratidza muchiito? Saka taura nesu kuronga demo remahara, kana kupihwa dzidziso kubva kuchikwata chedu chehunyanzvi. Chikwata chedu chichafara kukugamuchira iwe munzvimbo yedu kuti iwe uwane software yedu.
BHUKU DEMO PANO
BHUKU KUTI UCHIDZIDZEI IZVO